MY REMEMBRANCE: October 2008
သူဂျီတော့ မက်ဆေ့ငါ မြင်သဖြင့်
သူဟာလေ ငါ့ ကိုမပစ်
Posted by puluque at Friday, October 31, 20086comments Links to this post
Posted by puluque at Tuesday, October 28, 20082comments Links to this post
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကျတော့ အမ၀မ်းကွဲ တစ်ယောက်ကပြောပြတာပါ။ သူက ရခိုင်မှာ စက်ချုပ်ပါတယ်။ ရခိုင်လို စက်ချုပ်တဲ့သူကို စက်ဆရာမ(စက်သမ)လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ရခိုင်နဲ့ ချင်းနဲ့က ဆက်စပ်နေတာပါ။ ချင်းတွေက တောင်ပေါ်မှာ နေတာများပါတယ်။ ဈေးနေ့တွေမှာ လာပြီး သူတို့ဆီက ထွက်တဲ့ကုန်တွေကို ဈေ်းမှာလာရောက်ရောင်းချပြီး သူတို့လိုတာတွေကို ပြန်ဝယ်သွားတက်ကြပါတယ်။
တစ်နေ့တော ချင်းမတစ်ယောက်ဟာ ဈေးကိုလာပြီး သူမှာပါတာတွေရောင်း၊ နောက်သူလိုတာတွေ ၀ယ်ပါသတဲ့။ သူဟာ အင်္ကျီစ(ပိတ်စ) တစ်စကို ၀ယ်ပြီး အင်္ကျီချုပ်ဖို့ စက်သမဆီကို သွားပါသတဲ့။ ရခိုင်စက်သမတွေဟာ ပိတ်စ အရမ်းခိုးတယ်လို့ သူသိထားတယ်။ ဒါကြောင့် စက်သမဆီရောက်တော့ ပိတ်စကို သူ့ရှေ့တင်ဖြတ်ပြီး တစ်ခုဆီကို ဘာအတွက်ဆိုတာ ပြောဖို့ စက်သမကို ခိုင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ စက်သမကလဲ ပိတ်စကို သူ့ရှေတင်ဖြတ်ပြီး ဒါက အင်္ကျိလက်၊ ဒါက ကော်လံ၊ ဒါက ရှေ့ကိုယ်ထည်၊ ဒါက နောက်ကိုယ်၊ ဒါက ငို့ဖ လိုတစ်ခုဆီပုံပြီး ပြပါတယ်။
ဒီတော့ ချင်းမကလဲ “အင်း နင်ပြောတော့လဲ အားလုံးဟာ ကွတ်တိပဲ။ နင်တို့ ဘယ်မှာခိုးလို့လဲ”လို့ ပြောပြီး စက်ဆရာမ ချိန်းတဲ့ရက်မှာ ပြန်လာယူ မယ်လို့ ပြောပြီး စက်ဆိုင် ကနေ ထွက်ခွာသွား ပါတယ်၊
ချင်းမ.. မသိတာက စက်သမပြောတဲ့ “ငို့ဖ” ဆိုတာ “ငါ့ဖို့” ဆိုတာကိုပါ..ဟားဟား……..
Posted by puluque at Monday, October 20, 2008 13 comments Links to this post
ကျတော် ဒီနေရာမှာ ပြောလိုတဲ့ ပုံရိပ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ထင်ကျန်နေတဲ့ သူရဲ့ အပြုအမူ၊ ဟန်ပန် အမူအရာ ကိုပါ။
ဥပမာ..မဝါဝါ ခိုင်မင်း လို့ ကျတော်ဆိုလိုက်တာနဲ့ အားလုံးခင်မင်တဲ့ ဘလော်ဂါမမကြီးလို့ မြင်ကြမှာပါ။
ကိုရန်အောင်လို့ ကျတော်တွေးလိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီအစ်ကိုကြီးဟာ အိမ်မက်နတ်သမီး ကို အပိုင်း ၂ ထိပဲရေးပြီး ဆက်မရေးတော့တဲ့ ကိုရေခဲညှပ် အဖြစ် မြင်ယောင်မိနေတာကိုပါ။
အဲဒီလိုပုံရိပ် အဖြစ်မြင်ယောင်ဖိုဆိုတာ လိုအပ်တာတွေကတော့ အမြင်ခံဖို object (အရာဝတ္ထု)။ရှုမြင်တဲ့သူ (သို့) ကြည်မြင်သူနဲ့ သူရဲ့ ရှုထောင့်(ခံစားမှု)တို့ပါပဲ။
အရင်ကဆို မြန်မာလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဖော်ရွေ သဘောကောင်းတဲ့ နိုင်ငံသားတွေနေတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ နိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် လူတိုင်းက ရှုမြင်ခဲ့ ကြပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုး၊ နိုင်ငံသားလို့ဆိုလိုက်တာ နဲ့ အလုပ်ကြိုးစားပြီး ကျိုးနွံတဲသူတွေ အဖြစ် တော်တော်များများက မြင်ကြပါတယ်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နောက်ပိုင်း မြန်မာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သာသနာတော်ကို ပြစ်မှားတဲ့ စစ်အာဏာ၇ှင် အုပ်စိုးတဲ့ နိုင်ငံ အဖြစ် နိုင်ငံတကာက ပြောင်းလဲရှုမြင်လာ ကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ နာဂစ် ဖြစ်လာတဲ့အခါ တစ်မျိုး ပြောင်း လဲရှုမြင်လာကြ ပြန်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော ပုံရိပ်တွေဟာ ကျတော်တို့ ပြုလုပ်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပေမဲ့ တစ်ချို့ တွေဟာ ကျတော်တို့နဲ့ သွယ်ဝိုက်ပြီး သက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။
နောက်ဆုံးကျတော် ပြောချင်တာကတော့ ကျတော်တို့ဟာ ကျတော်တို့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပြုလုပ်သူဖြစ်သလို ကျတော်တို့ နိုင်ငံ၊ လူမျိုး အားလုံးရဲ့ ပုံရိပ်တွေ အဖြစ် သက်ရောက်မှု ရှိတာကြောင့်ကျတော်တို့အားလုံးဟာ မိမိရဲ့ ပုံရိပ်ကို ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းရင်း နိုင်ငံ ရဲ့ ပုံရိပ်ကို မြင့်တင်နိုင်သူတွေ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပါ။။။
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ပုလုကွေး လဲတစ်ခါတစ်လေ ဒီလို စာမျိုးတွေ ရေးချင်လာလို့ ရေးလိုက်မိတာပါ။ အမှားပါသွားရင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ ပုံရ်ိပ်ဆိုတာ ရှုမြင်သူ၇ယ်။ ရှုမြင်ခံ အရာဝတ္ထုရယ်၊ ရှုထောင့် ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနေမှာပါ။
Posted by puluque at Sunday, October 19, 20087comments Links to this post
Posted by puluque at Thursday, October 16, 20082comments Links to this post
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ တစ်ချို့ကတော ပေးဆပ်ခြင်းတဲ့။ တစ်ချို့ကတော့ ရယူခြင်း။ တစ်ချို့ကတော့ စွန့်လွှတ်ခြင်း။
….State ကျောင်းတက်နေတုန်းက မေမေကပြောတယ်.. အချစ်ကို မရှာနဲ့အုန်း.. ငယ်သေးတယ်.. တက္ကသိုလ်ရောက်မှရှာတဲ့…
….ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ ..ပြောပြန်တယ်… သုံးတန်း.လေးတန်းရောက်မှ အချစ်ကို ရှာတဲ့ဗျ..
….လေးတန်း၊ငါးတန်း၊ ဖိုင်နယ်ရောက်တော့ ပြောပြန်တယ်… အလုပ်ထဲရောက်မှ ရှာတဲ့…
ဟိဟိ.. ဒါက ကျတော့ မေမေနဲ့ ဒေါ်လေးတို့ပြောစကား။။။
…..ကျတော့ အချစ်က နီးမလိုနဲ့ဝေးနေတယ်…
ကျတော့ အစ်ကိုကြီးလိုခင်တဲ့ သယ်ရင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ “မင်းရင်ဆိုင်ရဲရမယ်လေ.. စွန့်စားရဲရမယ်လေ”တဲ့။
“ဟုတ်တယ် ကိုကြီး ကျတော်ဟာ အချစ်အတွက် စွန့်စားဝံ့တဲ့ သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။” မစွန့်စားဝံ့တာလား၊ မစွန့်စားချင်တာလား။ တကယ်သေချာတာကတော့ မစွန့်စားချင်တာပဲ ဖြစ်မည်ထင်သည်။
“မင်းတို့ ဘာသာတူတွေပဲလေ ညှိယူလို့ရမှာပါ” လို့ပြောတဲ့ သယ်ရင်းတစ်ယောက်ရဲ့ စကား ။ ကိုယ်တို့က ဘာသာတူတွေပဲ ဒါပေမဲ့ မတူတာတွေ အများကြီးပဲလေ။ ကိုယ်လို ဗမာစစ်စစ် တစ်ယောက် နဲ့ သူလို ဗမာပြည်မှာမွေးတဲ့ စိနမလေး အတွက်တော့ ဒါဟာ ကြီးမားလှတဲ့ ခြားနားချက်တစ်ခုပဲ။
မမတန်ခူးကတော့ “အချစ်ဆိုတာကို သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ နံရံပါးပါးလေး တစ်ချက်ကို ဖြိုလှဲခဲ့တယ်တဲ့လေ”။ မမရေ.. နံရံရဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာ ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကျတော်သိနေလို အဲဒီနံရံကို ဖြိုဖို့ ကျတော် အားမရှိဘူးလေ။
ကျတော် ကွမ်းယင်မယ်တော်ကြီးကို လဲ မ မခိုင်းချင်ပါ။ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်လောက်တော့ သူမအိမ်သွားတိုင်း ကျတော်သောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းကြီးထဲ သွားပြီးတော့လဲ ကျတော် စာသွားမချချင်ပါ။ မတော်ရတဲ့ ကျတော့ ယောက်ဖလေး နဲ့လဲ အတွင်းအား အကြောင်း အချိန်မရွေး ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ကျတော်သူကို သိပ်ချစ်တာ သူလဲသိသလို ကျတော်ကို သူချစ်တာလဲ ကျတော် သိပ်သိတာပေါ့။
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ တစ်ချို့က အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်းတဲ့။ တစ်ချို့ကတော ရယူခြင်းတဲ့။ တစ်ချို့ကတော့ စွန့်လွှတ်ခြင်းတဲ့။ ကျတော်ကတော့ “အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲ လိုပါသည်။”
ကျတော ပထမရေးထားတာက ဒီပို့စ်လေး မဟုတ်ဘူး။ အရင်ရေးထား တာတွေကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ပုလုကွေးဆိုတာ ဘယ်သူဆိုတာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က သိသွားရင် သူ့အတွက်မကောင်းနိုင်တာကြောင့် အားလုံးကို ကိုယ်ဟာကို ဆင်ဆာလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အထက်က ပို့စ်လေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာတွေပါ။ စလုံးမှာ ဟုတ်ဖူးနော်။ ကျတော် ဘာတွေရေးတာလဲဆိုတာ ဝေဝါးနေရင်တော့ ဒီသီချင်းလေး နားထောင်လိုက်ပါနော်။ မမတန်ခူးနဲ့ သယ်ရင်းဂျူလိုင် ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by puluque at Tuesday, October 14, 2008 8 comments Links to this post
ဂျပန်မလေးမိဂုမိက သီးချင်းတွေ ကြိုက်ကြောင်းပြောတော့ ဘယ်သူများ ဒီလိုပြောမလဲလို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ ကျတော် ဝမ်းသာမိတာ အမှန်ပါ။ ကျတော် ဖန်တီးတာမဟုတ်ပေမဲ့ ကျတော် တင်ဆက်တာကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေနပ်နေမိတာပါ။ ကျတော် အားလုံးအတွက် ရှဲလ် လိုက်ပါတယ်။ ပထမတော့ သီချင်းလင့်ကို သူ့ကိုပဲပေးမလို့။ ဒီလိုပို့စ်လေးတင်လိုက်တော့ လည်း ပို့စ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့။ ပို့စ်အသစ်ရေးရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့ အတော်ပဲ။
ပထမဆုံးက အဝေးက ဧည့်ခန်း အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းလေးတွေပါ။ အဲ့ဒီအဖွဲ့လေးကို ကျတော်တို့ သုံးတန်း(တတိယနှစ်) EC မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ တုန်းက လာဆိုတာ။(သူများတွေနဲ့ မတူ သုံးတန်း ရောက်မှ သစ်လွင်ကြိုပွဲ အလုပ်ခံရတဲ့ ကျတော်တို့တွေလေ.. အားလုံးဟာ အဘ မောင်သောင်းရဲ့ ကျေးဇူးတွေပဲ..ကျေးဇူးကြီးပါပေ့) သယ်ရင်းတွေက ကောင်းတယ်။ နားထောင်ကြည့်ဆိုတာနဲ့ နားထောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျောင်းပုံပြင်ကတော်တော်လေး ပေါက်ပြီး ကျတော်ကြိုက်တဲ့ ကားမှတ်တိုင်တို့ ကျန်သီချင်းတွေက ထင်သလောက်မပေါက်ဘူး။
နောက်ထပ်ပေးချင်တာက ဂျီလတ် ရဲ့သီချင်းတွေ။ ကိုကြီးရင်မောင်က ပေးလို့နားထောင်ဖြစ်တာ။ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ သီချင်းတွေနာမည်တော့သိဘူး။
ဂျီလတ် (G-latt) 1
ဂျီလတ် (G-latt) 2
ဂျီလတ် (G-latt) 3
နောက် တစ်ပုဒ်က ဘယ်အဖွဲ့က ဆိုတာလဲ ကျတော် မမှတ်မိတော့ဘူး။ သူလဲ sample သီချင်းလေးပဲ။ ဒီသီချင်းလေးနဲ့ ကျတော် post တစ်ပုဒ်ရေးဘူးတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဒီမှာပါ။ သီချင်းနာမည် က wor ite ni
Posted by puluque at Monday, October 13, 20089comments Links to this post
မမ၀ါ တက်ထားတဲ့ “ဗရုတ်သုတ်ခနေ့” ။ဘယ်နေများ ဖြစ်မလဲ။ စလုံး လို ပုံမှန် လည်ပတ်နေတဲ့ နေ့တွေထဲမှာ ဘယ်နေ့ကများ ကျတော် ဗရုတ်သုတ်ခ ဖြစ်နေခဲ့လဲ။
အင်း အဲဒီနေ့ဗျ။ တောသားလေး စလုံးကို ရောက်တော့ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ ပေါ့ဗျာ။ ရောက်တာက စနေနေ့ .. ဒါနဲ့ ရောက်တဲ့နေကတည်းက အလုပ်တွေတင်.. ပထမဆုံး အင်တာဗျူက ရောက်ပြီး လေးရက်မြောက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ စရတယ်။ အဲဒီမှာ စတွေ့တော့တာပဲ။ အင်တာဗျူးလာဖို့ ဖုန်းလာတာက အင်္ဂါနေ့ ညနေ။ ဖုန်းလာတော့ ရင်ကလဲတုန်။ စလုံးတရုတ်မရဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ကိုယ်ကနားမလည်။ ဒုက္ခကို ရောက်ရော။ ဒါနဲ့ တက်သမျှ မှတ်သမျှ အင်္ဂလိပ်လေးနဲ့ နာ့ကို မင်းတို့လိပ်စာ email ပို့ပေးလို့ပြောလိုက်ရတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်ရောက်တော့ ပုလုကွေးတစ်ယောက် အင်တာဗျူးသွားပါတော့မယ်။ ရှိုးနဲ့ စမိုးနဲ့ စတိုင်အပြည်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ သွားတုန်းကတော့ အကောင်းဗျ။ ပထမရေးဖြေ ဖြေရတယ်။ တော်တော်တော့ ဖြေနိုင်တယ်။
နောက်တစ်ပိုင်း လက်တွေ့ကို နေ့လည်ထမင်းစားပြီး ဖြေရမှာ။ ဆိုင်မှာ ထမင်းသွားစားပြီးအပြန် ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။ စီးလာတဲ့ ဖိနပ်အကောင်းစား တရုတ်လုပ်က ပြသာနာရှာပါတော့တယ်။ ပထမဆုံး ခွာကကွာလာတယ်ဗျာ။ ခွာကွာတာလောက်တော့ ပြသာာနာရှိဘူးပေါ့။ မှေးပြီးစီးသွားမယ်။ လမ်းတစ်ဝက်လောက် အရောက်မှာ ဖိနပ်ထဲက သံပြားက ဂလုပ်ဆိုထွက်ကျလာပါရော။ သံပြားနဲ့ လမ်းထိပြီးထွက်လာတဲ့ အသံနဲနဲကျယ်တော့ အတူပါလာတဲ ဖားတစ်ကောင်က ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီးနောက်လှည်ကြည့်။ ကိုယ့်မှာ ရှက်ရှက်နဲ့ ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့ ရှက်လိုက်တာကတော့ ပြောမနေနဲ့။
ရုံးထဲအ၀င်မှာ ပြသာနာကထက် ဖြစ်တော့တာပဲ။ ဂျပန်ကုပ္မဏီဆိုတော့ ရုံးအ၀င်ကို အားလုံးဖိနပ်ချွတ်ကတယ်။ ဖိနပ်ချွတ်တော့ ကိုယ့်ဖိနပ် အစုတ်လေးက သိသာနေတယ်။ ဟိဟိ။ ဒါနဲ့ ဂျောင်လေးထဲမှာ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး နောက်တစ်ပိုင်း လက်တွေ့ကို ဖြေရတယ်။ ဖြေရတာက လွယ်လွယ်လေးကို ဖိနပ်ပြသာနာတက်ပြီး ဗရုတ်သုတ်ခဖြစ်တာနဲ့ အားလုံးအလွဲလွဲ အချော်ချော်ပေါ့။ အင်တာဗျူး အပြန်လမ်းမှာ ဖိနပ်လေးကို ထော့နဲ့ထောနဲ့ နဲတရွတ်တ်ိုက် စီးလာပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။
အိမ်ပြန် ကားပေါ်မှာကလည်း ကိုယ့်ဖိနပ်က စုတ်နေပါတယ်။ အင်းတာဗျူးက ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်တာတွေ ပေါင်းပြီး ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင် တစ်ခုကျော်သွားပါလေရော။ အဲဒါလဲဒွတ်ခ။ ဖိနပ်မကောင်းပါဘူးဆို လမ်းထပ်လျှောက်ရတောမယ်။ ဖိနပ်အစုတ်လေးနဲ့ လမ်းကိုမှေးလျှောက်လာတယ်။ လမ်းဖြတ်အကူး လမ်းတစ်ဝက် လဲရောက်ရော . ဖိနပ်ခွာ တစ်ခုလုံးက ကွာသွားပါလေရော။ ကားလမ်းအကူး လမ်းအလည်တဲ့တဲ့မှာ ကိုယ့်ဖိနပ်ခွာ လေးက ထီးထီး ကျန်ခဲ့တယ်။ စလုံးလို အမှိုက်နဲတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဖိနပ်ခွာလေး(အောက်ခံ ဆိုးလ်ပြားတစ်ခုလုံး)က လမ်းလည်မှာ ထင်ထင်ရှားရှားလေးပေါ့။ ဟီးဟီး ရှက်လိုက်တာ။ လူတွေက ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် ကြည့်သွားကြတယ်ဗျာ။
အိမ်လဲ ပြန်ရောက်ရော ဒီလောက် ဒုက္ခပေးတဲ့ ဖိနပ် အမှိုက်ပုံးထဲကို ၀ဲပစ်လိုက်တော့တယ်။
စိတ်ကလဲ ညစ်ညစ် . ရှက်လဲရှက်ရှက်နဲ့ အရမ်းကို ဗရုတ်သုတ်ခ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေ့လေး တစ်ခုပါပဲဗျာ။ အခုချိန် ပြန်တွေကြည့်တော့ ရီစရာပေမဲ့ တော်တော်ကို ဗရုတ်ဗယတ် နေ့လေးတစ်ခုပေါ့။
အဟင်း....အဟင်း.. ပုလုကွေးတစ်ယောက် လည်ချောင်း၇ှင်းနေကာ တစ်ခုခုပြောပါတောမည်။ ကျတော် မောင်ပုလုကွေး ဆက်လက်ပြီး tag ချင်တာက တော့ သယ်ရင်း ဘိုဘို(EOM). မမလေးသွန်းသွန်း. မမလေး မဗေဒါ. မမလေး မိဂုမိ တို့ကိုပါပဲ။ ရေးပေးကြပါ ကုန်.. ကိုကို မမတို့ရေ...
Posted by puluque at Sunday, October 12, 20086comments Links to this post
ကျတော် အစားအသောက်တော့ ဖြစ်သလို မစားတက်ဘူး။ အိမ်မှာ ဟင်းမကောင်းတဲ့အခါ ကျတော်နှုတ်ခမ်း ဆူတက်လေ့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျတော် စားတဲ့ အကောင်းစားတွေ ဆိုတာ သူများအတွက်တော့ ဖြစ်သလိုပဲဖြစ်နေမလားသိဘူး။
ကျတော်ကျောင်းတက်တော့ လည်း ဖြစ်သလို သိပ်မစားလိုက်ရဘူးဗျ။ ကျောင်းမှာတော့ ကန်တင်းမှာ စားတာပေါ့။ ကျောင်းကနေ တိုက်ခန်း ပြန်ရောက်ရင် တော့ ကြုံတဲ့ နေရာမှာစားတယ်။ တခါတလေ လှည်းတန်းက (ဇေယျာသိရိလမ်းထဲက) ဆိုင်မှာသွားစာတယ်။ တခါတလေ ငွေဒေါင်းမင်းမှာ သွားစားတယ်။ ငွေဒေါင်းမင်းက ထမင်းပေါင်းကို ကျတော်ကြိုက်လို့။ တခါတလေတော့လဲ လမ်းထဲက ကြုံတဲ့ဆိုင်မှာ စားတယ်။ သယ်ရင်တွေဆုံရင် broadway မှာထိုင်တယ်။ တစ်ခါတလေ နယူးဆိုနီ ကိုရောက်တယ်။
ဒီထက်ဆိုးလာရင်တော့ ၁၉ လမ်းရောက်တယ်။ ဒီထက် ပိုလာရင်တော့ ပြောတောဘူးနော်… (တခါတလေ ညဘက် ဖဲရိုက်လို့ သန်းခေါင်ကျော် တစ်နာရီ နှစ်နာရီ ၀ိုင်းသိမ်းရင် သုံးဒေါင့်ကွေ့မှာ ထမင်းကြော် သွားစားတယ်) ဒါက တနင်္လာ နေ့ နေလည် ကနေ သောကြာနေ့နေလည်ထိပါ။
သောကြာနေ့ ညနေဆို ကျတော် အိမ်ပြန်တယ်။ ကျတော် မိဘတွေက ပဲခူးနားမှာနေတာပါ။
ကျတော်ပြန်လာမယ်ဆိုတာ သိတော မာမီက ကျတော်ကြိုက်တက်တာတွေ ချက်ပေးထားတယ်။ ကျတော် ဟိုတုန်းက ကြက်သားမစားဘူး။ အသားဆို ဝက်သားပဲစားတယ်။ ငါးဟင်း။ အသီးအရွက်ကြော်၊ အရွက်သုပ်၊ ချဉ်ဟင်းတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဟင်းခါးကို တော့ မကြိုက်ပါ။
ပဲခူးသား ဆိုတော့လဲ ငါးချဉ်ကြိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ဗမာ ကပြား(ဖီးကြမ်းလေးလေ) ဆိုတော့ ရခိုင် ဟင်းတွေကို လည်းကြိုက်တယ်။ ရခိုင်ဟင်းတွေဆိုလို့ ပုဇွန်ငပိနဲ့ အသီးအရွက်တစ်ခုခု ရောချက်ထားတဲ့ ခုတ်လှော်ဆိုတာ ကိုလည်းနှစ်သက်တယ်။
တစ်ခါတလေ အိမ်မှာ ဟင်းမကောင်းတဲ့ အခါ(ကြက်သား၊ဆိတ်သား ဘဲသား၊ ဆက်သား၊ စတဲ့ အသားဟင်းတွေ ချက်တဲ့ အခါ) ကျတော်က အကြော်နဲ့စားပါတယ်။ မာလာဦး ဘူးသီကြော်။ ကမ္ဘာကျော် အကြော်စုံ၊ ကုလားမကြီးကြော်တဲ့ အကြော်တွေဟာ ကျတော့ အတွက်တော့ နတ်သုဒ္ဓာအလားပါပဲ။
စလုံးရောက်တော့လဲ ကံကောင်းတယ်ပြောရမလားပဲ။ အတူနေ သယ်ရင်းတွေက ချက်ပြုတ်ရေး ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ သယ်ရင်းတောင်ငူသား ကြော်တဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ကြာဆံကြော်တို့ဆို အရမ်းကောင်းပဲ။ (ဟီးဟီး လူသိအောင် မောင်းခတ်ပေးတာ)။ တခါတလေ ကိုယ်ကိုတိုင်ချက်ပေါ့။
ဒါနဲ့ အိမ်မှာ ဟင်းချက်တက်တဲ့ သူက ဟင်းကို အလှည့်ကျ ချက်ကြတယ်။ ဟင်းမချက်တက်တဲ့ သူကို ကျတော်တို့က ဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုရင် .. “အရက်ဝယ်၊ ကြက်ဖမ်း၊ ငရုတ်သီးထောင်း၊ ခွေးမောင်း” လို့ခေါ်တယ်။ တောက်တိုမယ်ရ ကောင်လေးပေါ့ဗျာ။
ဒီစလုံး ရောက်တော့ တခါတလေ စားဖြစ်တဲ့ ကျတော့ ရဲ့ဖြစ်သလိုလေးက ထမင်းကို ငရုတ်ဆီ။ ဆီချက်၊ ငရုတ်သီးကြတ်မှုန့်၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့် တို့နဲ့နယ်။ သံပုရာရေလေး ညှစ်ထားတဲ့ ကျတော့ ထမင်းသုတ်။ ပြီးတော့ ကြက်ဥကို ကြက်သွန်များများနဲ့ ရောခလောက်ပြီး ကြော်တဲ့ ကြက်ဥကြော်တို့နဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့ ဖြစ်လိုပဲစားတယ်။
တောင်ပေါ်သားရေ.. ဖြစ်သလိုလေး စားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ စားချင်တာတွေ လျှောက်ရေးမိသွားတယ်။ အနော် ဘယ်သူကိုမှ မတက်တော့ဘူးနော်။ အားလုံးလဲ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ. ဟိဟိ။
Posted by puluque at Saturday, October 11, 20083comments Links to this post
ဒီပို့စ်လေးဟာ ကျေးဇူးရှင် ပဲခူးမြို့ အောင်သုခ ရိပ်သာ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဥူးစန္ဓိမ ဟောကြားသော တရားတော်မှ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီးနဲ့ နတ်သား အချိုးချ ကြည်ရင် နတ်သမီးတွေက များပါတယ်။ ဒါကြောင် တစ်ချို နတ်ဗိမ္မာန်တွေမှာ နတ်သမီးသာရှိပြီး နတ်သားမရှိပါဘူး။ နတ်သားမရှိ တော့ နတ်သမီးတွေဟာ ပျင်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင် ဘုံဗိမ္မာန်တစ်ခုက နတ်သမီးတွေဟာ နတ်တို့ ရဲ့ အရှင် သိကြားမင်းကြီးထံ လျှောက်တင်ပါတယ်။ ဒီတော့ သိကြားမင်းကြီးက ”အသင်နတ်သမီးတို့ သင်တို့ ဘုံဗိမ္မာန်ကို နောက် ၇ ရက် ကြာရင် နတ်သားတစ်ပါးရောက်ရှိလာမယ်လို့ ”မိန့်ပါတယ်။ ”ယခုအခါ အဲ့ ဒီနတ်သား အလောင်းဟာ လူပြည်က ဇရပ်တစ်ခုမှာ နေနေရတဲ့ လူနူ ကြီးပဲ။ နောက်7ရက်ကြာရင် နတ်သား အလောင်းဟာ ဇရပ်ပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ မြေကြီးပေါ်ရောက်တဲ့ အခါ သေကာနီးကောင်းမှု ကုသိုလ် အနေနဲ့ မြတ်သစ်ပင်တွေ ဆွဲနှုတ်ကာ ဇရပ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အတွက် နတ်သားအဖြစ် ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ” သိကြားမင်းက ဆက်လက်မိန့်ပါတယ်။
ညရောက်တော့ နတ်သမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နတ်သားအလောင်းအလျာကို သွားကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူနူကြီးဟာ နတ်သမီးတွေကို မြင်တော့ ” အသင်နတ်သမီး ဘာအတွက် ရောက်ရှိလာပါသလဲ” လို့မေးပါတယ်။ နတ်သမီး က ”အသင် ဟာ နောက် ၇ ရက်ကြာရင် ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ ဘုံဗိမ္မာန် ကို နတ်သား အဖြစ်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်လို့ လာကြည်တာပါလို့ ” မိန့်တယ်။ လူနူ ကြီးက ”ကျွန်ုပ် မှာ ဘာကုသိုလ်မှ မရှိ ဘာအတွက်ကြောင့် နတ်ဖြစ်မည်မဟုတ်” လိုဆိုတဲ့ အခါ နတ်သမီးက မြတ်သစ်ပင်တွေ ဆွဲနှုတ်ကာ ဇရပ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အတွက် နတ်သားအဖြစ် ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။
မနက်လင်းတော့ လူနူကြီးဟာ ငါမသေခင် ခဏလေးမှာတောင် ကုသိုလ် ပြုတာ နတ်သားဖြစ်မယ်။ ငါ့မှာ ၇ ရက်တောင်ကျန်သေးတော့ ကုသိုလ်များများပြုနိုင်တာပဲ ဆိုပြီး ကျောင်း။ ဇရပ် ၀န်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ကို ၇ ရက်လုံးလုံး ဆောင်ရွက်ပါတဲ့။
၇ ၇က်မြောက်တဲ့ နေမှာ နတ်သမီးတွေက နတ်သားကို မျှော်နေပေမဲ့ နတ်သားမရောက်လာလို့ သိကြားမင်းကို သွားမေးမြန်းပါတယ်။ သိကြားမင်းက ”အသင်တို့ လူပြည်ကို ဆင်းကာ နတ်သားအလောင်းကို ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့် နတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သွားပြောခဲ့ပါ သလား”လိုိ့ဆိုတော့ နတ်သမီးတွေက ”ပြောခဲ့ပါတယ်”လို့ ပြန်လျှောက်တင်သတဲ့။ အဲဒီအခါ သိကြားမင်းက လူနူကြီးဟာ ၇ ရက်ပတ်လုံး ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုလုပ်တဲ့ အတွက် သင်တို့ ရဲ့ ဗုံဗိမ္မာန်ကို ကျော်လွန်ကာ သင်တို့ထက်မြတ်တဲ့ ဘုံဗိမ္မာန်မှာ နတ်သားဖြစ်နေပြီလို့ ” ပြန်ပြောပါသတဲ့။
ကောင်းမှုကုသိုလ် များများပြုက မြင့်မြင့်မြတ်မြတ် ခံစားရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
Posted by puluque at Wednesday, October 08, 20083comments Links to this post
Posted by puluque at Tuesday, October 07, 2008 1 comments Links to this post
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာ တော်တော်လေး အေးပါသည်။ ရန်ကုန်မှာတောင် ဒီလောက်အေးတာ ဟိုတောင်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုနေလိမ့်မည်မသိ။ သူတစ်ယောက်ကော ချမ်းနေမည်လား။ ချမ်းအေးခြင်းနဲ့ လွမ်းဆွတ်ခြင်း ဝေဒနာကို ဘယ်သူကုစားပေးမှာပါလိမ့်။
နာရီကို ကြည်တော့ နံနက် ၄ နာရီကျော်ကျော်လေးသာ ရှိသေးသည်။ ဒါကြောင်သူ အိပ်ယာမှ မထသေးပဲ နှပ်နေလိုက်သည်။ အမ်ပီသရီး ပလေယာလေးကိုဖွင့် နားကျပ်ကို နားမှာတပ်ပြီး နားထောင်မိတော့ သီချင်းလေးက သူကို လွမ်းအောင်ပိုလုပ်နေပြီလား။
စိုင်းဆိုင်လ်မော် ရဲ့ သီချင်းလေးက နားကျပ်လေးမှတဆင့် သူနား.. နှလုံးသားထဲကို ရောက်လို့လာသည်။
ခွဲသွားတော့မဲ့ အလွမ်းပေးသွားတဲ့ နန်းရယ်….
ဒီသင်းတန်းကို စတက်ဖို့ ဘယ်သူက သူကို တိုက်တွန်းတာပါလိမ့်။ အောင်လေး လား.. ဒါမှမဟုတ် ..သူကိုယ်တိုင် တက်ချင်လို့ပဲလား။ ဘားပဲပြောပြော သူအတွက်တော့ သင်တန်းအပ်ပြီးထား တော့ တက်ရမှာပါပဲလေ။ ရန်ကုန်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော တက်ရတာ ကလည်းမလွယ်။ သူတို့လို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် သူတွေအတွက်ဖြစ်သည်။ တချို့ သင်တန်းတွေက သူတို့အတွက် နိမ့်လွန်းနေသည်။ တချို့သင်တန်းတွေကျတော့ သူတို့ နဲ့လှမ်းလို့မမှိ။မြင့်လွန်းလှသည်။
သင်တန်းစဖွင့်တဲ့နေမှာ အောင်လေးက ”ဟေ့ရောင် …ငါ အတန်းရှေက စောင့်နေမယ်။ ၁၂ခွဲလောက်ရောက်လာခဲ့” ဟုပြောကာ အိမ်မှထွက်သွားခဲ့သည်။ အောင်လေးက ၁၀ နာရီမှာ သင်တန်းတစ်ခုရှိလို စောထွက်သွားခြင်းပင်။
သူသင်တန်းရှိရာ အဆောက်အဦး ရှေရောက်တော့ အောင်လေးကို မမြင်။ ဒီကောင် အခန်းထဲဝင်သွားပြီးထင်တယ်။ ဒါနဲ့ သူလည်း အခန်းမေး ပြီးတော့ အပေါ်ထပ်
သူအတန်းထဲရောက်တော့ လူတော်တော်များနေပြီ။ ဆရာတွေတော့ မရောက်သေး။ သူ.. အောင်လေးနားမှာသွားထိုင်နေမိသည်။
”ဟေရောင် .. နောက်ကျလှချီလား”
”အေး” ဟု သူတစ်လုံးသာ ပြောနိုင်သည်။ အောင်လေးကို သူစကားမပြန်နိုင်သေး ။ သူ့ အကြည့်တွေက တစ်နေရာကနေ မခွာနိုင်သေး။
ခဏနေတော့ တီချယ်တွေ ရောက်လာသည်။ အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီး အတန်းသားတစ်ဦးချင်းစီ မိတ်ဆက်ခိုင်းသည်။ တီချယ်က တစ်ယောက်စီ နာမည်တွေ မေးပြီးတော့ nick name ပေးသည်။ပြီးတော့ အတန်းသား အားလုံးရဲ့ နာမည်တွေကို အလွတ် မှတ်ခိုင်းသည်။ ကျတော့ nick name ကို တီချယ်ပေးတာက သားဖြူ တဲ့။ ကျတော့ နာမည်၏ နောက်ဆုံး စလုံး။ သူမ ရဲ့ နာမည်းက နန်း…..။သူ့ ရဲ့ ချစ်သော နန်း..
အတန်းသားလုံး မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ အခါ တီချယ် လက်ချာပေးသည်။ လက်ချာ ပြီးတော့ ၂ယောက်တတွဲ စကားပြောခိုင်းသည်။ ကံကောင်းတာလား.. ကံဆိုးတာလားမသိ…သူနှင့် အတူစကားပြောရတာ ကတော့ သူရဲ့ နန်း….။ သူကစပြီးတော့ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
”good evening နန်း………”
”good evening ကိုသားဖြူ……..”
သူမနှင့် သူ စကားတော်တော်များများ ပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးနေ့ ဆိုတော့ သူအကြောင်း ကိုယ်အကြောင်းတွေသာ အဓိက ပြောဖြစ်သည်။
နောက်တနေ့မှာ သူသင်တန်း ရောက်တော့ သင်းတန်းစဖို့ မိနစ် ၂၀လောက်လိုသေးသည်။ သင်းတန်းအောက်မှ သူတယောက်ထဲ ရပ်ရင်း သူမအလာကို မျှော်နေမိသည်။ သူမလာတော့ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း ..
”ကိုသားဖြူ .. ဘယ်သူကို မျှော်နေတာလဲဟင်”
”အော် အောင်လေး ကို မျှော်နေတာဗျ” ဟု သူမလိမ်ချင်ပဲ လိမ်နေမိသည်။ သူမျှော်နေတာ သူမဆိုတာ နန်း..သိပါလေစ။
ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်းရင်း အတန်းသား အာလုံးဟာ မောင်နှမတွေလိုရင်းနှီးလာကြတယ်။ သူနဲ့ နန်းရဲ့ ရင်းနှီးမှုကတော့ သိပ်မတိုးတက်သေး။
နောက်တပတ်မှာ သူကော ၊ သယ်ရင်း အောင်လေးကော သင်တန်းမတက်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာသည်။ သူရောဂါတက်နေတာကို သိတော့ အောင်လေးက နန်းထံစာမေးရင်း ဖုန်းဆက်ဖို့ အကြံပေးသည်။ သူမထံ အရင်က ဖုန်းဆက်ချင်ပေမဲ့ သူဖုန်းမဆက်ရဲ။ ဘာကို လန့်နေတာလဲမသိ။ ဒဲာဒီနေ့က သူမထံ သူဖုန်းဆက်ဖြစ်လိုက်သည်။
”ဟယ်လို.. နန်းxx နဲ့ စကားပြောချင်လို့ပါ”
”ဟုတ်. နန်းxx ပါ. ဘယ်သူလဲဟင်”
”ကျတော် .. သားဖြူပါ””ဟို တစ်နေ့က သင်တန်းမှာ ဘာတွေ သင်လဲလို့”
”အော်… အဲဒီနေ့ကတောင် တီချယ် ဟီလာရီက မေးနေသေးတယ်.. ကိုသားဖြူတို့ နှစ်ယောက် ဘာလို့မတက်တာလဲလို့”
”ဟုတ်တယ်… ကျတော်လည်း အလုပ်နဲနဲ ရှုပ်သွားလို့ဗျ… တီချယ် ဘာတွေသင်သွားလဲ.. ကျတော့ကို ပြန်ရှင်းပြပေးလို့ရမလား”
”သင်တန်းကို စောစော လာခဲ့လေ.. မှတ်မိသလောက် ၇ှင်းပြမယ်.”
”ကျေးဇူးပဲနော်…”လို့ပြောရင်း ကျတော်ဖုန်းချလိုက်မိတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျတော်တို့ အိမ်ရှေ့က ရထားလမ်းမှာ ရထားဖြတ်သွားတဲ့ ခုန်းနှုန်းဟာ ကျတော့ ရင်လောက်ခုန်မယ်မထင်ဘူးဗျာ။။။။
ကျတော် ဒီဝတ္ထုလေးကို မရေးတက် ရေးတက်နဲ့ ရေးထားတာ ကြာလှပါပြီ။ ဒီဝတ္ထု လေးကို ပို့စ် အဖြစ် ကျတော့ ဘလော့လေးမှာ တင်သင်။ မတင်သင့် စဉ်းစားနေတာကလည်း တော်တော်ကြာပြန်ပါကော။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျတော်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သယ်ရင်း ၂ယောက်ဆီက feedback တွေပြန်လာပြီး ကောင်းချီး ပေး(ဆော်ပလော်တီးမှာ)ကြောက်လို့ဗျ။ အခုတော့ တင်လိုက်ပြီဗျာ......
Posted by puluque at Friday, October 03, 2008 10 comments Links to this post